4K Ultra HD Blu-ray Player na Discs - gị mkpa ịmata ihe | | OS-ụlọ ahịa Blog
4K Ultra HD Blu-ray Player na Discs – ị chọrọ ịmata ihe
February 10, 2018 admin Computer, Life, OS-ụlọ ahịa, OSGEAR Support, ngwaahịa, nchekwa, Technology 0
Ọ bụrụ na ị na-na na zụrụ a 4K Ultra HD TV, ị na-chọrọ ụfọdụ 4K ọdịnaya gaa na-ekiri na ya. More ọdịnaya a na-awa, gụnyere ụfọdụ gụgharia si saịtị dị ka Netflix, VUDU, na Amazon. N'otu oge ahụ, ọzọ na ndị ọzọ utu aha a na-wepụtara na 4K Ultra HD Blu-ray Discs. Ma na-egwu 4K Blu-ray Discs, you’ll have to invest in a 4K Blu-ray Disc player.
Iche n'Etiti Blu-ray na 4K Ultra HD Blu-ray Discs >>>
On diski n'akụkụ nke akụkụ, 4K Blu-ụzarị anya dị ka 5-anụ ọhịa (12cm) 50GB sọrọ oyi akwa anụ ahụ discs eji na Blu-ray diski format, ma 4K Blu-ray Disc format nwere a sọrọ oyi akwa ike nke 66GB na atọ oyi akwa 100GB ikike. 4K video n'ókè na-koodu na echekwara na discs na H.265 / HEVC format, nke nwere ike mpikota onu 4K video data n'ime ohere na dị na discs.
Nke a pụtara na iji afanyekwa nchekwa na ihe Ultra HD Blu-ray diski, echekwara video na audio ọmụma ga-abụ dị nta, nke pụtara na ha enweghị ike ịdị na-agụ a ọkọlọtọ Blu-ray Disc player.
Gịnị ọzọ Disc Format Mgbe Anyị Nwere gụgharia >>>
Ọ bụ ezie na internet gụgharia ka toro site mmali-and-ókè, ọ bụ ka ọ bụghị mgbe niile kasị mma nhọrọ. Ọmụmaatụ, iji enuba 4K ọdịnaya, gị mkpa a brọdband ọsọ nke dịkarịa ala 15Mbps (a Netflix nkwanye) na, hoo haa, a otutu brọdband debanyere aha na-enweghị ohere dị otú ahụ gbapụrụ ọsọ. N'ezie, brọdband gbapụrụ ọsọ dịgasị nnọọ iche iche gburugburu U.S. si ka ala dị ka 1.5Mbps ka dị elu dị ka 100Mbps, nke pụtara na ọtụtụ na-eji ọkụ na-adịghị ọbụna nwere ndị na-agba na-enubata 1080p ọdịnaya, ka naanị 4K. N'ezie, yana ohere akwa gbapụrụ ọsọ, na-abịa elu ndenye aha ahịa.
Ihe ọzọ iburu n'uche bụ na ọ bụ ezie na ịnweta ọdịnaya na internet bụ “a na-achọ,” ọ dịghị nkwa na gị chọrọ ọdịnaya ga-anọ ya mgbe nile. Ọmụmaatụ, Netflix mgbe niile purges okenye na-erughị anya ọdịnaya site ya online katalọgụ, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị a anụ ahụ oyiri nke na ọkacha mmasị nkiri ma ọ bụ TV show, i nwere ike otu ụbọchị ịbụ chioma.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ Blu-ray Disc egwuregwu ugbu a ekwukwa internet gụgharia, upgrading ka a 4K Blu-ray Disc player ga-enye na-eji ọkụ na a n'elu ikpo okwu iji nweta dị nnọọ banyere niile dị diski formats (4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, CD) na internet gụgharia, ọ bụ ezie na e nwere ndị a họrọ nọmba nke elu-ọgwụgwụ Ultra HD Blu-ray diski Player na-adịghị nwere wuru na-internet gụgharia, ewere ahịa obibia nke nnweta Smart TV na na mpụga media streamers ka nke a mma ejighi oru.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a player na-na-agụnye internet gụgharia ikike, ịlele maka nke a mma tupu ị zụrụ.
Olee otú ude 4K Blu-Ray Disc na mbanye >>>
4K Blu-Ray Discs nwere 4K Logo na n'elu ; 4K mbanye ma ọ bụ egwuregwu na-enwe UHD Logo, ọ pụtara Ultra HD. Họrọ ziri ezi mbanye na diski isonyere 4K video.
More Blu-Ray ọmụma, pịa ebe a.
Novatel E371 E362 EU850D 3G WWAN WLAN Ikuku WiFi Kaadị modul ọkwọ ụgbọala windo Download
Samsung Nokia Technology_Internet ngwaọrụ Model Ekwentị mkpanaka Public Nzube software ọkwọ ụgbọala nkwado Intel HD Graphics OS-ụlọ ahịa processor 64-bit Windows HTC ihe Njikwa Ngwaọrụ CPU Technology processors iwu nkọwa Series Driver Support
processors HD Graphics Samsung Galaxy smartphones Samsung processor Technology_Internet Qualcomm 64-bit Windows ngwaọrụ Model ihe Njikwa Ngwaọrụ OS-ụlọ ahịa CPU ọkwọ ụgbọala nkwado software iwu nkọwa Public Nzube Ekwentị mkpanaka Intel Intel Server Technology Series Driver Support Nokia HTC Sony Ericsson